जाजरकोटमा ९ को मृत्यु , २ सय बढी प्रभावित !::त्रिशुलीखवर
जाजरकोटमा ९ को मृत्यु , २ सय बढी प्रभावित !
जाजरकोटमा एक सातादेखि फैलिएको प्रकोपबाट दुई सयभन्दा धेरै प्रभावित
जाजरकोट, पुस २३ । एक सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोका कारण जाजरकोटमा नौजनाको मृत्यु भएको छ । दुई सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । मृत्यु हुनेमा पाँच बालबालिका र चार वृद्धवृद्धा छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटका फोकल पर्सन खेम पुनका अनुसार सदरमुकामभन्दा २३ कोस टाढाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखिएको हो ।
अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा जुनीचाँदे–२ मजकोटकी ५२ वर्षीया धनसरा नाथ र ७२ वर्षका सतरूप शाही, ६२ वर्षीया आइती तिरुवा, फापरबायाँ टोलका ५२ वर्षीय करसिंह टमाटा, स्थानीय रामबहादुर शाहीको पाँच दिनका छोरा, शान्तबहादुर शाहीको दुई महिनाका छोरा, मानबहादुर विकका पाँच महिनाका छोरा, काले दमाईंको सात महिनाका छोरा, बिर्ख नाथकी पाँच वर्षकी छोरी कविता र एक नाम नखुलेको बालक रहेको स्वास्थ्य चौकी बड्कुलेका इन्चार्ज हरिबहादुर सिंहले बताएको खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
एउटै घरका तीनरचार बिरामी, परीक्षा प्रभावित
जुनीचाँदे गाँउपालिका–२ मजकोटमा धेरै बिरामी परेका छन् । एउटै घरमा ३–४ जना बिरामी परेको स्थानीय काशीराम न्यौपाने बताए । छेडागाडका सुवानाउली र टीकाचौरमा रुघाखोकीका बिरामी धेरै छन् । बारेकोट गाउँपालिका–५ मा भाइरल ज्वरोले विद्यार्थी विद्यालय आउन नसकेको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक मनबहादुर सिंहले बताए ।
विद्यार्थी नआउँदा परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको एक दिनपछि ल्याब टेक्निसियन कृष्ण खत्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा गएका छन् । ‘रोगको पहिचान गर्न टेक्निसियन पठाएका छौँ,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर नेपालीले भने, ‘एचवानएनवान हो कि भनेर टेस्ट किड पठाएका छौँ ।’
काठमाडौंरजाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोलाई सरकारले सिजनल इन्फ्लुएन्जा (एचवानएनवान) को आशंका गरेको छ । बिरामीमा देखिएको लक्षण एचवानएनवानसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बिरामीको रगत ९सेम्पल० काठमाडौं मगाएको छ ।
महाशाखा निर्देशक डा. भीम आचार्यले जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल ज्वरोबारे शनिबार मात्रै जानकारी पाएको भन्दै बिरामीको रगत तत्काल काठमाडौं पठाउन निर्देशन दिएको बताए । ‘बिरामीको अवस्था हेर्दा सिजनल इन्फ्लुएन्जा ९एचवानएनवान० जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर रगतको परीक्षण नगर्दासम्म के भएको हो भन्न सकिन्न ।’